Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Nke 2
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Telugu Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè, Nke 2
Ndụmọdụ ị ga-achọ ka mmadụ nye gị bụ ndụmọdụ ga-abara gị uru. Ụdị ndụmọdụ ahụ dị n’akwụkwọ Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè, Nke 2. N’akwụkwọ a, e nwere ọtụtụ ndị na-eto eto a gbara ajụjụ ọnụ. Ha si ebe dị iche iche n’ụwa. Ihe nyeere ha aka ná ndụ bụ ndụmọdụ na-enweghị atụ dị na Baịbụl. Gụọ akwụkwọ a ka ị hụ aka ọ ga-enyere gị.
Akwụkwọ a ga-enyere gị aka ịza ajụjụ ndị i nwere banyere: